Samsun Mutlaka Demir İpek Yolu'na Bağlamalı | RayHaber | raillynews
HometareenkaNidaamka Isgaadhsiinta ee IntercitySamsun Mutlaka Birta oo ku xiran waddada Birta ah
08 / 10 / 2018 Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, TURKEY
MUSIAD xubnaha xubnaha sareyn ururka wada jir ah ula ganacsato Canik Duqa Osman Young iman, in ka kililka dhaqaalaha dunida oo diirada Turkiga oo bixiya fursado muhiim ah in Samsun, ayaa sheegay in ayaa sheegay in fursaddan si ay u si fiican u qiimeeyaan magaalada.
MUSIAD Tabarucid Canik Cusmaan Cusmaan Genc, ​​xubno ka tirsan guddiga madaxa-bannaan ee Ganacsatada Warshadaha Madaxa-bannaan (MUSIAD) iyo xubno ka tirsan ururka ayaa la kulmay ganacsatada. Janik Xarunta Dhaqanka ee aan micnaha Guddoomiyaha MUSIAD Branch Haluk Tan shirka Madaxweynayaasha Young ah 'qaadataa meel ganacsato halkaas, ka hadlay fursadaha ay sugayaan ganacsatada ee World Cusub oo Samsun, muhiimadda ay leedahay Turkiga. sheegaysa in ka kililka dhaqaalaha dunida iyo bixiyaan fursado la taaban karo goolka Turkey ee Samsun Young, ayaa sheegay in fursadahaas waa in ay noqon in dib u eegista wanaagsan.
SAMSUN WAA LAGU QAADAN KARAA MAGAALADA
Ujeedada Samsun, Turkey iyo madaxweyne Young ee xoogga on baahida loo qabo inay ku beeganto dunida dhabta ah, ayuu yiri Samsun waa magaalo la iman kara. Madaxweynaha Young, "Haddii aan ordo, ma iska indho tiri karo mustaqbalka iyo sidii magaalo dib-u-qaabaynta dunida iyo gool Turkiga. Hadafyada magaalooyinka waa inay ku ekaadaan kuwa dalalka. Samsun waxay ahayd magaalo ganacsi xilliyadii hore. Maanta waxay gacanta ugu jirtaa sidii dhaqdhaqaaqa magaaladan dib loogu dhisi lahaa. Annagoo adeegsanayna xuquuqda iyo himilooyinka aragtida ah, waxaan mar labaad Samsun ka dhigi karnaa magaalo ganacsi. Haddii aan warshadeyn iyo ganacsi lagu horumarin magaalada, magaaladaasi horumar iyo barwaaqo ma yeelan karto. Waa inaan ganacsiga ku horumarinaa Samsun mutlak.
RAILWAY NETWORK WAA IN LAGU QAADAN KARAA
Duqa Cusmaan Genç wuxuu xasuusiyay magaalooyinku inay ku tartamayaan kunka kun ee cusub wuxuuna yidhi, "Waa inaanu isku keenno sayniska iyo ganacsiga. Waxaan ubaahanahay inaan helno jaamacada magaalada. Dhammaanteen waa inaan gaarno isbedelka maskaxda. Haddaba 4. waxaan ku nool nahay xilligii warshadaha. Waa inaan muhiimad gaar ah u leenahay R&D Kama tartami kartid magaalooyinka iyo dalal kale adoo iibinaya yaanyada iyo basbaaska. Gaadiidka iyo saadka ayaa safka hore kaga jira muddadan. Samsun waa inay iskeed u qorsheysataa si ku habboon. Waa inaan xoojinaa shabakada tareenka ee Samsun oo aan magaaladan ku xiraa Iron Silk Road. Waa inaan sidoo kale dadaal u galinaa sidii magaalo-isku-xidha Samsun-Batumi iyo Samsun-Ciraaq. ”
'Maareeyayaashu waa inay ku qasbaan ganacsiga'
Isagoo xusay inay Samsun u baahan tahay laba shay oo ay tahay “qorshayaal iyo aaminaad Genç, ayuu yidhi Genç,“ Magaaladan waa inay noqotaa Tilmaanta Isticmaalaha. Haddii aad tan sameyso, waxaad xallisay boqolkiiba 80 dhibaatada magaalada. Aaminaadda, dhanka kale, iyo sidoo kale amniga nidaamka kala dambeynta dadweynaha, magaaladan, macnaheedu waa maareeyayaashu waa inay kalsooni siiyaan maalgashadayaasha. Majirto sabab ay magaaladeenu u soo jiidan weydo maalgashi markaan bixino. Iyagu waa dawladaha hoose ee hagi doona magaalooyinka. 21. Qarnigii 16aad, cabirka guusha ee badhasaabyada ayaa la beddelay. Waxaad ku guuleysataa sida tirada iskuulada, xarumaha dhaqanka, isbitaalada iyo warshadaha aad u keentay magaalada, iyo sida aad uga hortagto shaqo la’aanta, guushaada ayaa ku guuleysan doonta. Marka waxaad qiimo u leedahay sida aad soosaarto ..
”Alt =” ”ballac =” 468 ″ height = ”300 ″ />
Tartanka Taariikhda Iron Iron A Road to Binali Yıldırım
Iron Iron Road wuxuu noqon doonaa xarunta logistik ee Erzurum
Iron Iron Road Line in lagu qaabeeyo Ankara